Ku shaqeynta samir, World Church of God Switzerland (WKG)
Dhamaanteen waan ognahay oraahda "samirku waa wanaag". In kasta oo uusan ku jirin Kitaabka Quduuska ah, haddana Kitaabka Quduuska ahi wax badan buu ka sheegayaa samir. Bawlos wuxuu ugu yeedhay midhaha Ruuxa Quduuska ah (Galatiya 5,22). Wuxuu sidoo kale na dhiirrigelinayaa inaynu dulqaad yeelano cidhiidhi (Rooma 12,12), adkeysi dulqaad leh waxaan sugeynaa weli (Rooma 8,25) Oo dulqaadashadiinnii kalgacayl leh (Efesos 4,2) iyo daalku markuu wanaag sameeyo, maxaa yeelay hadaanu dulqaadana waannu goosan doonnaa (Galatiya 6,9). Baybalku wuxuu sidoo kale nooga digayaa "inaan Rabbiga sugno" (Sabuurradii 27,14), laakiin nasiibdarro bukaankan sugitaankiisu waxaa si khaldan u fahmay qaar ka mid ah sugitaan dadban.
Mid ka mid ah wadaaddadayada gobolka ayaa ka qeybgalay shir ay hoggaamiyeyaasha kaniisaduhu kaga jawaabeen wadahadal kasta oo ku saabsan cusboonaysiinta ama howlgalka sida soo socota: "Waan ognahay inaan u baahan nahay inaan tan samayno mustaqbalka, laakiin hadda waxaan sugeynaa Rabbiga." Waxaan hubaa in hoggaamiyeyaashani rumaysteen inay samir leeyihiin iyagoo sugaya Ilaahay inuu tuso sida loola dhaqmo shisheeyaha. Waxaa jira jameeco kale oo sugaya calaamad xagga Rabbiga ka ah si ay u beddelaan maalmaha ama waqtiyada cibaadada si ay ugu fududaato rumaystayaasha cusub. Wadaadka gobolka wuxuu ii sheegay in waxa ugu dambeeya ee uu weydiiyay jaranjarada uu ahaa: "Maxaad ka sugeysaa inuu Sayidku sameeyo?" Markaas ayuu u sharraxay iyaga in Ilaah laga yaabo inuu sugayo iyaga inay kaqaybqaataan shaqadiisii ​​hore ee firfircoon. Markii uu dhammeeyey, "aamiin" dhinacyo badan ayaa laga maqli karaa.
Haddii aan haysanno xulashooyin adag si aan u gaarno, kulligeen waxaan jeclaan lahayn inaan ka helno calaamad xagga Ilaah ah oo aan ku tusin karno kuwa kale - mid noo sheegaya meesha aan u soconno, sida iyo goorta aan bilaabayo. Tanina maahan sida uu Eebbe caadiyan noola shaqeeyo. Taa bedelkeed, wuxuu kaliya dhahayaa "i raac" oo wuxuu nagu wareynayaa inaan qaadno tallaabo horay u qaadis ah anaga oo aan fahmin faahfaahinta. Waa inaan xasuusnaano inay rasuulladii Ciise mararka qaar dhibaato ku qabeen fahamka halka Masiixa ku hogaaminayay ka hor iyo ka dib Bentakostiga. Si kastaba ha noqotee, inkasta oo Ciise uu yahay macallin iyo hoggaamiye dhammaystiran, iyagu ma ay ahayn xerti iyo xertii kaamil. Annaguna badanaa waxaan ku dhib badnayn fahamka waxa Ciise dhahayo iyo halka uu na hogaaminayo - mararka qaar waxaan ka baqi karnaa inaan dhaqaaqno maxaa yeelay waxaan ka baqeynaa inaan ku guuldaraysto. Cabsidaani badiyaa waxay nagu kicisaa wax qabad, oo markaa aan si qalad ah u la midno sabirka - anaga "sugitaanka Rabbiga".
Uma baahnin inaan ka cabsanno qaladaadkeena ama caddeyn la'aan ku saabsan dariiqii hore. In kasta oo xertiisii ​​ugu horreeyay ee Ciise sameeyeen qaladaad badan, haddana Sayidku wuxuu siiyey inuu siiyo fursado cusub oo uu kaga mid noqdo shaqadiisa - inay raacaan meel kasta oo uu hogaaminayo, xitaa haddii taasi ay la micno tahay in la saxo jidka. Ciise wuxuu u shaqeeyaa si la mid ah maanta oo wuxuu ina xusuusinayaa in "guul" kasta oo aan la kulanno ay ka dhalayaan shaqadiisa oo aan ahayn shaqadeenna.
Waa inaanan ka walwalin haddii aan si buuxda u fahmi karin ujeeddooyinka Ilaah. Waqtiyada aan la hubin, waa inaan dulqaad muujino, xaaladaha qaarna tan macnaheedu waa inaan sugno faragalinta ilaahay inta aan qaadan tallaabada xigta. Xaalad kasta oo ay tahay, waxaan had iyo jeer nahay xerta Ciise oo loogu yeedhay inay maqlaan oo raacaan. Safarkan, waa inaan xasuusnaano in tababbarradeenu aysan ahayn oo keliya tukashada iyo akhrinta Baybalka. Codsi la taaban karo ayaa qayb weyn ka qaata - waxaan ku hormaraynaa rajo iyo iimaan (oo ay weheliso duco iyo ereyga), xitaa haddii aysan caddayn meesha uu Sayidku hoggaaminayo.
Ilaah wuxuu doonayaa in kiniisaddiisu ay ahaato mid caafimaad leh si ay u soo saarto koritaan. Wuxuu doonayaa inuu nagu soo biiro hadafkiisa dunida, si aan u qaadno tillaabooyinka ku saabsan injiilka. Haddii aan sidaa yeelno, khaladaad baan sameyn doonnaa. Mararka qaarkooda, dadaalkeenna ah inaan injiilka la wadaagno kuwa aan shisheeyaha ahayn ma yeelan doontid rajo-guul. Laakiin waxaan ka baran doonaa khaladaadka. Sida kaniisadihii hore ee Axdiga Hore, Sayidkeennu wuxuu si deeqsinimo leh u adeegsan doonaa khaladaadkeenna haddii aan aaminno oo aan toobadkeenno haddii loo baahdo. Isagu wuu ina xoojin doonaa oo na horumarin doonaa oo na qaabayn doonaa sidii aan u noqon lahayn u ekaanta Masiixa. Fahmitaankaan, uma arki doonno natiijooyinka deg degga ah sidii fashil. Waqtiyadiisa iyo jidkiisa, Ilaah wuxuu ku sameyn karaa oo ka dhigi doonaa dadaalkeenna midho dhal, gaar ahaan marka dadaalladan lagu jiheeyo xagga u horseedidda dadka xagga Ciise isagoo nool oo wadajirka la wadaaga. Midhaha ugu horreeya ee aan arki doonno waxay saameyn ku yeelan karaan nolosheena.
Guusha "dhabta ah" ee howlgalka iyo adeeggu waxay ka timaadaa hal jid oo keliya: aaminka Ciise, oo ay weheliso tukashada iyo ereyga kitaabiga ah, kaas oo Ruuxa Quduuska ahi inagu hoggaamiyo runta. Aan maskaxda ku hayno inaanan baran doonin runtaan isla markiiba isla markaana waxqabadkayagu uu hoos u dhigi karo. Waxaan la yaabanahay hadii waxqabadka ay u sabab tahay cabsi runta. Ciise wuxuu si joogto ah ugu dhawaaqay xertiisii ​​dhimashadiisa iyo sarakiciddiisa, marmarka qaarkoodna cabsida runta ayaa curyaamisay awooddooda wax qabad. Tani badanaa waa kiisaska maalmahan.
Markaan ka hadalno ku lug lahaanshaheena habka Ciise ee ajnabiga, waxaan si dhaqso leh wax uga qabaneynaa falcelinta cabsida. Si kastaba ha noqotee, uma baahnin inaan cabsanno, maxaa yeelay "kan idinku dhex jira ayaa ka weyn kan dunida jooga" (1 Yooxanaa 4,4). Cabsidayadu waxay luntaa kalsoonida aan ku qabno Ciise iyo eraygiisa. Rumaysadku runtii waa cadowga cabsida. Taasi waa sababta Ciise u yidhi: "Ha cabsanin, rumayso!" (Mark 5,36).
Haddii aan si firfircoon uga dhex-muuqanno waajibaadka Ciise iyo adeegga caqiidadiisa, keli kuma nihin. Sayidkii uunka uumay oo dhan wuu inala jiraa, siduu Ciise hore buurta Galili ugu fogeeyey (Matayos 28,16) wuxuu xertiisii ​​u ballanqaaday. In yar ka hor intuusan jannada kor u qaadin, wuxuu iyaga siiyey tilmaamo, taas oo inta badan loogu yeero amar adeeg ahaan: «Ciise ayaa u yimid oo ku yidhi iyaga, Amar oo dhan ayaa samada iyo dhulka laygu siiyey. Haddaba taga, oo quruumaha oo dhan xer ka dhiga, oo ku baabtiisa magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah oo bar iyaga inay xajistaan ​​wixii aan kugu amray oo dhan. Oo bal eeg, anigu maalin walba waan kula joogaa ilaa dhamaadka dunida. (Matayos 28,18: 20).
Aynu isla eegno aayadaha ugu dambeeya halkan. Ciise wuxuu ku bilaabayaa isagoo leh inuu leeyahay "amar oo dhan oo jannada ku jira iyo dhulka", ka dib wuxuu ku soo gabagabeynayaa ereyada ballanqaad ee soo socda: "Waan kula joogaa maalin walba". Hadaladaani waa inay noqdaan il raaxo leh, kalsooni weyn, iyo xorriyad weyn wixii Ciise noo sheegay inaan sameyno: quruumaha oo dhan xer ka dhig. Waxaan tan u sameyneynaa si furfurnaan ah - annagoo ka war qabna inaan ka qeybgalno shaqada kan leh awoodda oo dhan. Waxaanna ku qabnaa kalsooni maxaa yeelay waxaan ognahay inuu had iyo jeer nala jiro. Adoo fikradahan maskaxda ku haya - halkii kuwa sabir u arka inay yihiin shaqo la’aan - waxaan u dulqaadanaynaa Rabbiga inta aan si firfircoon uga qeyb qaadaneyno shaqadiisa, taas oo ah inaan dadka ka dhigno xerta guryaheena. Sidan ayaan uga qeyb qaadan karnaa waxa aan ku sifayn karno dulqaad. Ciise wuxuu ina farayaa inaan sidan u yeelno maxaa yeelay kani waa jidkiisa - waa jidka aaminka ah ee midhihii midhihii boqortooyadiisa haatan jira. Marka aan helno si aan ugu shaqeyno dulqaad.